XASAASI:- Dowladaha Itoobiya & Imratka iyo Arimo Halis Ku ah Dakadaha Iyo Dhaqaalaha Mustaqblka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XASAASI:- Dowladaha Itoobiya & Imratka iyo Arimo Halis Ku ah Dakadaha Iyo Dhaqaalaha Mustaqblka Soomaaliya
Ahmed weheliye Gaashaan 25 June 2018 26 June 2018
Muqdisho ( mareeg news ) Hoggaamiyaha isku taga imaaraatka carabta mohamed Bin zaayid safar uu ku tagay dalka itoobiya ayaa loogu gogol xaaray damaca Imaartka ee ka leeyihiin dakadaha soomaliya sidoo kalana waxaa lagu fudeeyay Damacii qotada dheeraa ee qarniyada soo jiray ee itoobiya ku sheeganeeysay dhulka soomaalida.
Arimaha ugu waaweynaa ee ka wada hadleeyn labada hogaamiye waxaa kamid ahaa.
1- In Imaaraatka xoojiyo ciidamada dowlada Itoobiya Hub iyo qalab casri ahna geeyo wadankaas si loo dhiso ciidan heeysta hubka xiligaan ka jira dowladaha dunida taya xoogana looyeelo ciidanka wadankaas.
2- Xiritaanka saldhiga turkisom Ee soomaliya iyo in meesha laga saaro ciidan soomaaliyeed oo awoowd leh.
3- In laga hortago wax walba oo caqabad ku naqan kara Abuu Dubi iyo ila heeda dhaqaale oo ay ugu horeeyaan maja xaabinta dakadaha soomaliya iyo in dakadaha laga ilaaliyo Dowladaha quwada leh ee hirmarin kara dakadahaas.
4-Imaaraat oo ku soo dul gambanaya itoobiya in uu helo wax kasta oo ay uga baahanthy soomaliya si loo ilaaliyo maslaxada UAE.
5- Taageerida dowlad gobeledyada si loo wiiqo awooda dowlada dhexe meeshana looga saaro is faham siyaasadees oo ka dhex dhasha maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe.
6- Kabista dakhliga itoobiya oo ay imaaraatka ku bixinayaan maalyiin dollar.
Mohamed bin zayid iyo maamulkiisa ayaa sidoo kale loolan dhanka dakadaha ah kula jira dowladaha shiinaha iyo Pakistaan oo waxeeyna imaaraatka taageero xoogan siiyeen Dalka Hindiya kadib markii Dowlada Pakistaan ka biyadiida qandaraas ay imaaraatiyiinta ku doonayeen in ay 40 sano saxiixdaan Dakada Gawaadir, waxeey dowlada Pakistan hishiis Hormarineeyd iyo Wada Tareen oo ka timaada dalka Shiinaha, Dakadan gawaadir oo Imaaraatiyiinta Horay gacanta ay uga hayeen ayeey Dowlada pakistaan Kansashay kadib markeey wax hormarin ah ku sameey waayeen.
Dhanka kale dowlada UAE waxeey 100 sano kireeysatay Marasada cadan 2008 taa oo ay hoos dhigtay Shixnadihii ganacsi ee kasoo dagi jiray Dakada Cadan ee dalka yaman.
Dowlada imaaraatka oo hada aanan laheeyn wax u badala Dhaqaalaha dakadaha ku tiirsan ayaa waxaa muuqaneeysa in ay itoobiya u soo mareeyso dakadaha soomaaliya si looga ilaaliyo dadlka kale ineey maalgashi muuqda ku sameeyaan dakadaha soomaaliya.
Dalak Shiinaha ayaa Maamulka Puntland u soo bandhigay inuu dakada ka dhiso Hafuun balse hogaanka maamulkaas ayaa ka biyadiiday arintaasna waxay salka ku heeysaa in imaaraatiyiinta ay raali ka eheeyn in dakad horumarsan ka hirgasho marin biyoodka Baabil mandab iyo eeriyada biya mareenkan casriga ah.
Dowlada shiinaha ayaa dooneysay ineey ka dhisto goobtan Dakad ay ku kala wareegaan shixnadaha shiinaha uu doonayay inuu u suuq geeyo dowlada yurub iyo afrika taasna ay soomaaliya faaiido badan ugu jirto.
Dowlada Jabuuti ayaa kansahsay horaantii sandanka Hishiis ay kula jirtay shirkada DP World oo dowlada UAE U qaabilsan hormarinta dakadaha kadib markii ay kasoo bixi waayeen wax yaabihii lagu hishiiyay waxaana qandaraaskaa qaatay dowlada shiinaha oo gashay badalkii UAE.
Dowlada soomaaliya Waxeey dhex Dabaalaneeysa Ciyaar siyaasadeed aad u adag oo salka ku heeysa ganacsi iyo Istaaraatiijiyad maamulka madaxweyne farmaajo oo bishan aan ku jirrno hishiis afar dakadood ah la galay itoobiya ayaa shaki la gelinayaa cida hishiiskan maal galineeyso oo lagu tuhmaayo imaaraatka oo Ay baarlamaanka soomaaliya ka mamnuuceeyn dhulka soomaalida.
Somalia: Five people killed by gunmen in Warsheikh
Col.Gabre Oo laga Ceeyriyay Shaqadiisii soomaaliya.